वर्षको ६ लाखजति कमाउँछु’ – यू-१९ कप्तान रोहितकुमार पौडेल ! १२-२७ कुराकानी (भिडियो सहित) – Mix Khabar
वर्षको ६ लाखजति कमाउँछु’ – यू-१९ कप्तान रोहितकुमार पौडेल ! १२-२७ कुराकानी (भिडियो सहित)
काठमाडौं । जुँगाको रेखी भर्खरै बसेका रोहितकुमार पौडेल नेपाली क्रिकेटको भावी स्टारका रुपमा हेरिएका छन् । उनको आगमनले नेपालको धर्मराउँदो ब्याटिङलाई केही राहत दिएको छ ।
१५ वर्षका किशोरले राष्ट्रिय टिममा स्थान दिइँदा आश्चर्यजनक मानिएको थियो । तर, उनले आफूलाई त्यसको लायक सावित गरे । अनुभवी ब्याट्सम्यानहरु लर्बराएको बेला उनले पटक-पटक नेपालको ब्याटिङलाई दिशा देखाएका छन् । उनीबारे अहिले नै निस्कर्षमा पुग्नु चाँडो हुन सक्छ तर, नेपालले मध्यक्रममा एउटा भरोसायोग्य ब्याट्सम्यान भेट्टाएको महसुस गरेको छ ।
नवलपरासी घर भएका रोहितका बाबु भूपू इन्डियन आर्मी हुन् । उनले छोरालाई कहिल्यै पढाईमा मात्रै केन्द्रित हुन दबाव दिएनन् । रोहितका दाजु राजु पौडेल क्रिकेटका पारखी थिए । उनीसँगै टेनिस बलमा खेलेर रोहितले क्रिकेटको अक्षारम्भ गरेका हुन् ।
नेपालले पहिलोपटक टी-२० विश्वकप खेलेको टेलिभिजनमा हेरेपछि रोहितको क्रिकेट मोह ह्वात्तै बढ्यो । ‘त्यतिबेलाबाटै क्रिकेटमा करिअर बनाउने सोचेको हुँ,’ उनले भने ।
आफ्नो सोचाईमा परिवारको सपोर्ट पाएपछि उनी चार वर्ष अगाडि क्रिकेट सिक्नकै लागि काठमाडौं आएर बालुवाटार क्रिकेट क्लब ज्वाइन गरे । चाँडै नै आफूलाई निखारे ।
बालुवाटार क्रिकेट क्लबमा रहँदै गर्दा उनी भैरहवामा ट्यालेन्ट हन्ट प्रोग्राम भइरहेको भनेर दाइले फोन गरे । खेलाडी छनोटका लागि जगत टमाटा, विनोद दास, रमन शिवाकोटी लगायत थिए । आठ जना सेलेक्सन हुँदा रोहित पनि परे । त्यसपछि ५२ जनाको क्याम्प भयो । त्यसबाट २४, हुँदै १५ जनाको टिम तयार भयो । रोहित टप १५ मा एउटा अलराउन्डरको भूमिकामा छानिए र पहिलोपटक एशिया कपको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेले ।
श्रीलंकामा भएको यू-१९ एशिया कप अन्तरगत भारतविरुद्ध रोहितको ब्याट चम्कियो । नेपाललाई जिताउन नसके पनि उनले ६८ रनको योगदान दिएका थिए । त्यसैगरी बंगलादेशविरुद्ध नेपाल २ विकेटले हार्दा रोहितको ब्याटबाट ४० रन निस्केको थियो ।
त्यसपछि उनले घरेलु प्रतियोगिता धनगढी प्रिमियर लिगको पहिलो संस्करण खेले । काठमाडौं गोल्डेन्सले उनलाई खरिद गर्‍यो तर, उनका लागि सम्झिनलायक रहेन ।
त्यही वर्ष भएको एभरेस्ट प्रिमियर लिग भने उनको करिअरमा टर्निङ प्वाइन्ट नै बन्यो । प्रतियोगितामा टीम भैरहवाबाट खेलेका उनले ‘मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयर’ को उपाधि पाए । दुईवटा खेल उनले एक्लो बुतामा जिताएका थिए ।
Posted on: Thursday, May 16, 2019 Time: 7:47:00